ဖုန်းတွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းများ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > ဖုန်းတွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:15 AM Moblie Knowledge, နည်းပညာဗဟုသုတ
[Zawgyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ခုတစ်လောပိုင်းကတော့ Apple က iPhone တွေကို နှေးအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပွက်လောရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Android ဖုန်းထုတ်သူတွေဖြစ်တဲ့ HTC, LG, Huawei နဲ့ Samsung တို့ကတော့ သူတို့ဖုန်းတွေကို နှေးအောင်လုပ်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဒါဆို Android စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက နှေးအောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Android ဖုန်းတွေ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှနှေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းက ဘာများဖြစ်မလဲ??
စမတ်ဖုန်းတွေကို ၆လ တစ်ကြိမ်လောက်လဲသုံးတဲ့သူမျိုးဆို သိမှာမဟုတ်ပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီသုံးတဲ့သူတွေဆိုရင် ၁နှစ်ကျော်လာတာနဲ့ app တွေ load လုပ်ရတာကြာလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက Android တွေအတွက် ပြဿနာတစ်ခုလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ရလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျလိုပါပဲ။ တကယ်လို့ Windows PC တစ်လုံးရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုနှေးလာမှာပါပဲ။
ဒီလို နှေးကွေးတာတွေကိုဖြစ်လာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ app တွေအများကြီး ထပ်ထပ်ထည့်လာတာက ဖုန်းတစ်လုံးကိုနှေးလာစေတဲ့အကြောင်းဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါမဟုတ်ဘဲ ဖုန်းတစ်လုံးကို နှေးကွေးလာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက
Android တွေမှာဖြစ်တတ်တာတစ်ခုက ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းမှာ သွင်းထားတဲ့ OS version က အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးနိုင်တာပါ။ ဖုန်းရဲ့ update က မြှင့်ဖို့မပြောခင်မှာပဲ Android ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကို မြှင့်လိုက်ပြီဆိုရင် သေချာတာက performance ကျလာပါမယ်။
Apple နဲ့မတူတာကတော့ Android စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေက ဖုန်းတွေကို တမင်သက်သက်နှေးအောင်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ OS ဗားရှင်းအသစ်တွေက ကိုယ့်အရင်ဖုန်းအဟောင်းရဲ့ specs တွေနဲ့ဆိုရင် ကောင်းလာစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဗားရှင်းအသစ်တွေကို နောက်ဆုံးထွက် specification တွေနဲ့ကိုက်အောင်ပဲ ဖန်တီးထားတာကြောင့် ဗားရှင်းအသစ်ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင် processing power ကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Android user တွေအတွက်တော့ OS upgrade လေးရလိုက်ရင် ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတောင်မှ ခုချိန်ထိ OS ကို မမြှင့်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ OS ကို မမြှင့်တာတောင်မှ သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေနှေးနှေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းက app တွေကို update လုပ်လို့ပါ။ app တစ်ခုမှာ feature တွေတိုးတိုးလာတာနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ resource တွေလည်း လိုလာပါပြီ။ တကယ်လို့ အရင် ၂၀၁၄ ကတည်းက Facebook app ကို ခုထိသုံးနေသေးတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးဗားရှင်းလောက်နေရာသိပ်မယူလို့ ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်နေမှာပါ။ အရင်က Facebook app က RAM မှာ 60-70 MB လောက်ပဲနေရာယူခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ မရတော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ဖုန်းထဲမှာ app တွေများနေတာပါ။ ဖုန်းထဲမှာ ဒါတွေစုနေတာက စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသွားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဖုန်းကို အချိန်မီကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ OS upgrade ကိုရပ်ပြီး app update တွေကို disable လုပ်လို့ရပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေက flash memory ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ flash memory ဆိုတာကတော့ ကြာကြာမသိမ်းတဲ့ SSD ခေါ် solid-state-drive ဖြစ်ပြီး သူတို့သုံးတဲ့ logic-gate တွေကိုကြည့်ပြီး NAND နဲ့ NOR ဆိုပြီး ၂မျိုးကွဲပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အများဆုံးသုံးတာကတော့ NAND ဖြစ်ပြီး တော်တော်များများသုံးနိုင်တဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုပါ။
တတ်နိုင်တဲ့ သုံးနိုင်တဲ့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဆိုးကျိုးလေးတွေကပ်ပါလာတတ်ပါတယ်။ NAND က မြန်ပေမယ့် ပြည့်လာတဲ့အခါကျရင် နှေးလာတတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ အမြန်နှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် NAND မှာ block အပိုတွေပါဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ internal storage က ၂၅% လောက်လွတ်နေသေးတာတောင်မှ flash memory ကြောင့် နှေးသွားတာမျိုးတွေက မဖြစ်သင့်တာပါ။
NAND တွေရဲ့ အဓိက ပြဿနာက အသုံးပြုမှုကိုလိုက်ပြိး memory ကျဆင်းသွားတာပါ။ NAND memory မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ write cycle ရှိတဲ့အတွက် ပြည့်သွားရင် အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ NAND မှာလည်း ၃မျိုးခွဲထားပြီး တစ်ခုချင်းစီမှာ မှတ်နိုင်တဲ့ write cycle အရေအတွက် အကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်။ ဒီ write cycle တွေကတော့ လုံးဝရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းက ကိုယ်သုံးသုံး မသုံးသုံး ဒေတာတွေကို flash drive ပေါ်မှာသွားမှတ်၊သွားရေးနေရတာကြောင့်ပါ။
Source: DroidView Credit:digitaltimes
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျခုတဈလောပိုငျးကတော့ Apple က iPhone တှကေို နှေးအောငျလုပျထားတယျဆိုတဲ့သတငျးတှနေဲ့ ပှကျလောရိုကျနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Android ဖုနျးထုတျသူတှဖွေဈတဲ့ HTC, LG, Huawei နဲ့ Samsung တို့ကတော့ သူတို့ဖုနျးတှကေို နှေးအောငျလုပျထားခွငျးမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုကျပွနျပါတယျ။ ဒါဆို Android စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတှကေ နှေးအောငျလုပျထားတာမဟုတျဘူးဆိုရငျ Android ဖုနျးတှေ အခြိနျကွာလာတဲ့အမြှနှေးလာရခွငျးအကွောငျးရငျးက ဘာမြားဖွဈမလဲ??
Android user တှအေတှကျတော့ OS upgrade လေးရလိုကျရငျ ရငေတျတုနျးရတှေငျးထဲကလြိုကျသလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတောငျမှ ခုခြိနျထိ OS ကို မမွှငျ့တဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိနပေါသေးတယျ။ OS ကို မမွှငျ့တာတောငျမှ သူတို့ရဲ့ဖုနျးတှနှေေးနှေးလာရခွငျးအကွောငျးရငျးက app တှကေို update လုပျလို့ပါ။ app တဈခုမှာ feature တှတေိုးတိုးလာတာနဲ့ လုပျဆောငျဖို့ resource တှလေညျး လိုလာပါပွီ။ တကယျလို့ အရငျ ၂၀၁၄ ကတညျးက Facebook app ကို ခုထိသုံးနသေေးတယျဆိုရငျ နောကျဆုံးဗားရှငျးလောကျနရောသိပျမယူလို့ ကောငျးကောငျးကွီးလုပျဆောငျနိုငျနမှောပါ။ အရငျက Facebook app က RAM မှာ 60-70 MB လောကျပဲနရောယူခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ မရတော့ပါဘူး။
ဖုန်းတွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှနှေးလာရခြင်းအကြောင်းရင်းများ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:15 AM Rating:5[Zawgyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ခုတစ်လောပိုင်းကတော့ Apple က iPhone တွေကို နှေးအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပွက်လောရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် And...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:15 AM